Akụkọ - Etu esi etinye onye na-ebu mgba mgba ụkwụ na ihe bụ mkpụrụedemede na-arụ ọrụ.
Etu esi etinye ihe na-ebugharị mgbaaka belt na ihe odide na-arụ ọrụ.
Mgbanwe eriri mgbawa coneyor ugbu a nhazi ga-eji na n'ichepụta nke inyeaka software, dị ka CNC igwe, CNC igwe ngwá ọrụ mmepụta akara na igwe na ngwa dị ka ịcha, na ya ngwa akporo bụ nnọọ nkịtị, na ojiji nke kpọmkwem pụrụ ukwuu welie arụmọrụ nke nwere ọgụgụ isi n'ichepụta na nhazi. N'okpuru yiri ka e ji mara ụdị ígwè ọrụ, akụrụngwa na ngwa.
Ntinye nke ihe nkwụnye mgbaaka mgbatị
Ebe nchekwa mmiri na-abanye n'ime igbe nchekwa mmiri ahụ, n'akụkụ ya na kposara ya. Efere chain bụ isi ihe mejupụtara igwe mwepụ igwe, ihe eji agbụ ígwè dị ezigbo mkpa, mkpebi nke mwepụ igwe ọrụ ọrụ ndụ. ọrụ, nwere ike ogologo oge ngwa.
Njirimara nke yinye igwe iwepụ igwe.
Akụrụngwa a enweela ogologo oge na mmezi, mkpokọta na ịhazi, ụlọ ọrụ na-emepụta ihe enweela ụkpụrụ dị ala.Easy iji, ọrụ, mmezi dị mfe.Ugbu a n'ahịa nke nkọwa dị iche iche nwere ike ịtụle ọtụtụ ụdị ịcha mkpa ugbua, nwekwara ike maka zọ anwụ nke obere na-ajụ sized akụkụ, oyi n'isi igwe nnyefe equipment.Besides elu nnyefe arụmọrụ, nnyefe ọnụego họrọ Atiya bụ nnọọ nnukwu.
Mkpokọta na yinye efere dịgasị iche iche, mkpokọta ịme ngosi uwe pụrụ iche, ezigbo ọrụ. Goodsfọdụ ngwongwo nwekwara ọrụ nke ibu, ịdị arọ dị mfe, na arụmọrụ dị elu, CNC na NC ụlọ ọrụ mmepụta ihe na akụrụngwa bụ isi ihe enyemaka na akụrụngwa.
Chain plate chip removal machine structure dị mfe, ugbu a enweela nkọwa dị iche iche, ọtụtụ nnukwu na ọkara sized iji gbakwunye usoro mmepụta, igwe igwe milling, ihe igwe CNC ọnụ ọgụgụ, n'ihi oke njirimara ya, dị elu nkenke egwe ọka n'elu-arụ ọrụ ike, ezi akụrụngwa mmezi na management, na-eme n'ọdịnihu mmepụta na nhazi igwe n'ichepụta nrụpụta ọrụ dị oke egwu.